Naya Drishti | 'नेकपा बारे अदालतले भन्नै नहुने कुरा भन्यो, फैसला अनपेक्षित' : प्रचण्ड - Naya Drishti 'नेकपा बारे अदालतले भन्नै नहुने कुरा भन्यो, फैसला अनपेक्षित' : प्रचण्ड - Naya Drishti
‘नेकपा बारे अदालतले भन्नै नहुने कुरा भन्यो, फैसला अनपेक्षित’ : प्रचण्ड
दुर्गा विसि / चैत्र २६, सल्यान । सल्यानको सल्लीबजार पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाबारे अदालतले अनपेक्षित फैसला गरेको बताएका छन ।
कर्णाली प्रदेशको भ्रमणको क्रममा बुधबार सल्लीबजारमा भएको कार्यकर्ता भेटघाट तथा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । ‘हामीले त सोच्या थियौं, अदालतले बढी भन्यो भने नाम अर्को फेर्नुहोस् भन्ला,’ प्रचण्डले भने, ‘किनभने त्यो भन्दा अरु ठाउँ थिएन । तर, अनौंठो भयो । अदालतले भन्नै नहुने कुरो भन्यो ।’
त्यस्तै सल्लीबजारमा उनले आफ्नो जनयुद्धकालीन भुमिगत अवस्थाको स्मरण गरेका छन ।
२०५३ सालमा रुकुम चौहरजारीबाट सल्लीबजार सम्म पैदल हिडेर आएको उनले स्मरण गरेका हुन । कर्णाली प्रदेशको भ्रमणको क्रममा बुधबार सल्लीबजारमा भएको कार्यकर्ता भेटघाट तथा सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा स्मरण गरेका हुन ।
अध्यक्ष प्रचण्डले सल्लीबजार रुकुम चौहरजारी सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने कुरामा जाेड समेत दिएको थिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताको सपनाको रक्षा गर्ने अभियानमा फेरि एक पटक लागेकोले त्यो ठीक भए नभएको वारे घर-परिवारमा सल्लाह गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘ यो बीचमा दुर्घटना हुने खतरा पैदा भएको थियो। त्यो दुर्घटनाबाट राष्ट्रको रक्षा, जनताको रक्षा र तपाईं हाम्रो सपनाको रक्षा गर्नको लागि म फेरि एकचोटी यो अभियानमा छु ।’
उनले यो अभियानबारे घरपरिवारमा चिन्तन मनन् र सल्लाह गर्न समेत आग्रह गरे। ‘तपाईंहरूसँग भेट भयो, छोटो समयमा उपस्थित भएर मेरो कुरा सुन्नु भयो,’ सल्लीबजारमा आयोजित सानो सभा तथा भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘विचार गर्नुहोला मेरो कुरा । तपाईंहरुलाई कस्तो लाग्छ ? ठीक भने कि बेठीक भने की ? चिन्तन, मनन् गर्नुहोला घर परिवारमा । साथीभाइहरूमा सल्लाह गर्नुहोला ।’
बाँकी जीवन विकास निर्माण र समृद्धिका लागि लगाउने संकल्प गर्दै आफू चुनावमा गएको र त्यसको तीन वर्षपछि दुर्घटना हुन खोजेको उनले टिप्पणी गरे । ‘यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै जनताको विकास र समृद्धिको सपना पुरा गर्न धेरै ठूला-ठूला कुरा गर्ने मौका पाएँ मैले,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘नेपालको इतिहासमै कमै नेताले यस्तो मौका पाउँछन् । मैले पाएँ । अब बाँकी जीवन विकास निर्माण, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादका निम्ति दिन्छु भनेर संकल्प गरेर चुनावमा गएँको थिएँ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो दुर्घटना गराउन खोजको प्रचण्डको भनाइ थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन र एकता अहिले पनि जरुरी रहेको भन्दै प्रचण्डले फेरि पनि त्यसका लागि लाग्ने बताए। ‘कम्युनिष्ट आन्दोलन र एकता अहिले पनि जरुरी छ,’ उनको भनाइ छ, ‘हामीले गरेको एकता गल्ती गरेको होइन । त्यो सही नै हामीले गरेको हो । फेरि पनि आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नैपर्छ । फेरि पनि राजनीतिक दलहरूकाबीचमा समझदारी गर्नैपर्छ ।जनता माथिकाे याे ठुला धाेका हाे ।’ परिवर्तनकाे सबै उपलब्धि कुल्चिन खाेजेकाे दावी गरे ।